Dite mainty voajanahary China miaraka amin'ny mpanamboatra sy mpamatsy Ganoderma lucidum | Xianzhilou
GANOHERB USDA Organis Reishi Mushroom Black Tea Bags-Tea Herbal eo noho eo miaraka amin'ny Ganoderma lucidum- -Fampitomboana ny hery fiarovana sy ny fanamaivanana ny fihenjanana ary ny angovo feno-Vegan, Paleo, Free gluten, tsy misy siramamy, 0,07 Ounce (20 isa)
♦ ORINASA PRISTINA - Ny ravina dite mainty ampiasaina amin'ity vokatra ity dia avy amin'i Fujian, Sina, iray amin'ireo fiaviana maniry maniry lehibe indrindra eran'izao tontolo izao. Manana tantara mamboly dite mihoatra ny 1000 taona izy noho ny haavony, ny hamandoana, ny tany ary ny mari-pana ho an'ny fambolena hazo dite avo lenta sy tsy misy loto.
♦ NANATSIKA NY FITIAVANA REISHI - Ity vokatra ity dia nampiana miaraka amin'ny fitrandrahana holatra Reishi Mushroom, fanafody nentim-paharazana sinoa izay fantatra koa amin'ny hoe "ahitra majika". Izy io dia mirakitra ny fotony mahasoa avy amin'ny dite mainty sy ny Reishi Mushroom, izay manome lanja bebe kokoa ny sakafo raha oharina amin'ny ambiny eny an-tsena.
♦ ORGANIKA CERTIFIED 100% USDA - Samy nambolena 100% ny Holatra Reishi sy ny dite mainty. Izahay dia manao dingana tokana mandritra ny fambolena sy ny dingana famokarana manaraka tsara ny fenitry ny voajanahary USDA, fa tsy ny famonoana bibikely, famonoana poizina, na zezika simika akory no nampiasaina, manome ny kalitao avo indrindra sy ny sakafo mahavelona ho an'ny mpanjifanay.
♦ Mahafinaritra sy mahasalama - Ity dite mainty Reishi Mushroom ity dia mitovy amin'ny dite mainty tsara, miaraka amina votoatin'ny Reishi Mushroom, tsy misy tsiranoka holatra mihitsy. Izy io dia manana fofona salantsalany tsy manam-paharoa sy tsiro haingana. Ity dia fomba tonga lafatra hanamafisana ny marainao amin'ny alàlan'ny fahatsapana ny fihavaozana sy ny tsiro. Tsara ihany koa izy amin'ny fiarahana amin'ny tsindrin-tsakafo toy ny cookies sy mofomamy. Azonao atao koa ny manampy ronono sy siramamy arakaraka ny safidinao manokana.
♦ Tombontsoa ara-pahasalamana - Ny dite mainty dia loharanom-pahalalana mahery vaika toy ny polyphenol sy catechins, izay manampy amin'ny fisorohana ny fahasimban'ny sela amin'ny radika afaka. Ary koa, ny polysaccharides sy ny triterpenoid ao amin'ny Holatra Reishi dia voaporofo ara-tsiantifika fa mahomby amin'ny fanatsarana ny hery fiarovan'ny vatana, fanatsarana ny kalitaon'ny torimaso, fampitomboana ny microcirculation ary fanampiana ny fitsaboana homamiadana.
Teo aloha: Ny marika manokana dia mampihena ny kapila voajanahary amin'ny siramamy
Manaraka: Ny otrikaina momba ny fahasalamana sy ny tokantrano ary ny famenon-tsakafo fanampiny famenony CoQ10
Ganoderma Lucidum Holatra
Famatsiana orinasa 100% dite voajanahary voajanahary voajanahary
Amidy tsara indrindra amin'ny holatra holatra Maitake, Grifola ...
Famaritana manokana Dite Green miaraka amin'i Reishi Teabag Box ...
Dite ronono miaraka amin'ny fitrandrahana Ganoderma Lucidum voajanahary
Kapsula vita amin'ny vongana turmerika voajanahary 100%
Sôkôla mafana miaraka amin'ny sôkôla Ganoderma Mellow f ...
Vovon-tsavony, Lingzhi Tea, Vovon-tsavony azo avy amin'ny holatra Reishi, Sora Reishi voajanahary, Reishi Spore Extract, Ganoderma Lucidum Holatra, Vokatra rehetra